Nsogbu Azụmaahịa - yana Ngwọta - maka 2021 | Martech Zone
N'afọ gara aga, ọ bụ njem dị egwu maka ndị na-ere ahịa, na-amanye azụmaahịa n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mpaghara niile iji kwado ma ọ bụ ọbụlagodi usoro niile n'agbanyeghị ọnọdụ enweghị atụ. Nye ọtụtụ ndị, mgbanwe dị ịrịba ama bụ mmetụta nke ịkpapụ mmekọrịta mmadụ na ebe obibi ya, nke mebere nnukwu otuto na ọrụ ịzụ ahịa n'ịntanetị, ọbụna na ụlọ ọrụ ebe ecommerce adịghị na mbụ dị ka akpọ. Ngbanwe a mere ka ebe obibi dijitalụ juputara na ya, na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-agba mbọ maka ndị na-azụ ahịa karịa ka ọ dịbu.
O yighị ka ngbanwe a ga-agbanwe onwe ya. Ihe ịma aka maka 2021 bụ ịchọpụta otu esi egbutu mkpọtụ ma nyefee ụdị ahụmịhe bara uru na nke onwe onye nwere ike ịlụ ọgụ na mmekọrịta ihu na ihu.
Na-ebute alizationkè nke Onwe-gi
Otu n'ime ụzọ kachasị dị mma iji mee ka ịhazi ahịa ahịa bụ iji echiche zuru oke banyere njem ịzụ ahịa nke onye ahịa. Usoro data nke atọ na-eme ka o kwe omume.
Ọ bụ ezie na kuki na ụdị ndu nwere ike ịba uru, ndị na-ere ahịa dijitalụ nwere ike ịga n'ihu data omume kẹta ikpughe ọbụna nghọta miri emi banyere njem ndị ahịa, gụnyere ọrụ ịzụ ahịa oge, echiche peeji, ntinye aka email, oge nọrọ na saịtị, na ndị ọzọ.
Ojiji nke data nke atọ ga-adịwanye mkpa ka anyị na-ahụ mgbanwe na akparamàgwà ndị ahịa nke ọrịa na-efe na-achịkwa. Dịka ọmụmaatụ, data nchịkọta nke Jornaya chịkọtara gosipụtara mgbanwe dị ukwuu kwa afọ na usoro ịzụ ahịa n'ịntanetị metụtara mkpuchi ụlọ. Mgbe ọ tụlere izu abụọ mbụ nke ọrụ ịzụ ahịa mkpuchi ụlọ na Mee 2020 na izu abụọ mbụ nke Mee 2019, Jornaya tụlere mmụba 200% na ọnụ ọgụgụ ndị na-azụ ihe n'ịntanetị yana mmụba 191% na ọrụ ịzụ ahịa ha. Nke a nwere ike dakọtara na akụkọ ihe mere eme ụlọ ọrụ mgbarakwa ụlọ obere ọnụego gburugburu ebe obibi, nke butere mmụba n'ịzụ ahịa mgbara n'ịntanetị.
Iji gbatịa ihe atụ a, maka azụmaahịa mkpuchi ụlọ, ajụjụ a na-abụzi n’ime ndị na - azụ ahịa ọhụrụ a na-azụ ahịa maka amụma nwere ebumnuche ịzụta yana nke na - arụsi ọrụ ike mgbe ha nọ n’ụlọ ma ọ bụ na - azụ ahịa windo dijitalụ maka na ha nụrụ ozi ọma kwuo na ọnụego dị obere?
Ijikọta data omume nke atọ na nke atọ na-enyere ndị na-ere ahịa aka ịmata ụdị dị iche iche nke ebumnuche, kenye ndị na-ege ha ntị, ma nyefee ozi ndị kwekọrọ na uche ndị ahịa, yana ikekwe kachasị mkpa, na-ebute mbọ ọ bụghị na echiche mmadụ ma na-eme ihe data onye ọ bụla nwere ike ime. Ruo afọ iri gara aga ma ọ bụ karịa, ọtụtụ ndị otu azụmaahịa na-eduga etinyela nnukwu ego n'ịzụ ahịa na personas-nkewa nkewa na izipu ozi dabere na otu ndị ahịa ma ọ bụ atụmanya yiri ya. Agbanyeghị, nke a ka na-ere ahịa na nkezi ọ bụghị ndị mmadụ.
Nzọụkwụ ezi uche dị na azụmaahịa evolushọn bụ ire ahịa nye onye ahụ dabere na omume ha gosipụtara gosipụtara ọ bụghị n'omume a na-atụ anya ya nke otu ma ọ bụ ndị otu ahịa ahịa ma ọ bụ ndị sayensị data jikọtara ha. Àgwà omume na-enye ọkwa nghọta na-enweghị atụ na-na nke a bụ akụkụ dị mkpa-ejiri nke ọma yana yana nchekwa nzuzo nke ndị ahịa, na-enye nnukwu ndị ahịa na ndị ahịa na ndị na-azụ ahịa nnukwu uru site na ịkwalite ahụmịhe ịzụ ahịa. Ọ dị oke mkpa ka anyị cheta na ichedo nzuzo nke ndị ahịa dị mkpa ka ịnakọta data ha. Gbasaa ntụkwasị obi ha na ndị ahịa ga-azụ ahịa ha n’ebe ọzọ.
Ibute Nzuzo Data Nke mbu
Ekwuola ya na mbụ, mana ọ na-ekwughachi: nzuzo data kwesịrị ịbụ ntụle na atụmatụ dijitalụ ọ bụla nke ahịa. Ọbụghị naanị na otu dị iche iche na-enweta ntaramahụhụ ego dị ukwuu maka ịghara ịgbaso usoro iwu data, usoro data echekwaghị eche nwere ike ịkpalite echiche nke enweghị ntụkwasị obi n'etiti ndị ga-azụ ahịa ma nwee oke mbibi na iguzosi ike n'ihe dị ogologo oge. N'ezie, ọmụmụ egosiwo na ndị na-azụ ahịa na-eche na a na-emezigharị data ha kwụsị iso gị na-azụ ahịa.
Iwu Nzuzo Oge
Iwu nzuzo US metụtara ụlọ ọrụ anyị na 1991 na Iwu Ekwentị Nchedo Ndị Ahịa (TCPA), nke dị ugbu a n'okpuru nyochaa site Courtlọikpe Kasị Elu.
Na-amali elu na-gaba 2018, European Union webatara General Data Protection Regulation (GDPR).
GDPR na-esote ngwa ngwa data nchebe iwu nzuzo na United States, ndị Iwu Nzuzo Ndị Ahịa California (CCPA), nke ghọrọ mmanye na July 2020.
N’ọnwa Nọvemba a gara aga, California gafere CCPA site na ịgafe 24 na-atụ aro- nke a makwaara dị ka ikike nzuzo na mmanye iwu California. O mere ka CCPA gbasaa ma mee ka o sikwuoro ndị ahịa ike ịgbado ndị ahịa dabere na ọrụ ha n'ịntanetị.
California nwere ike duru ụzọ, mana 30 na-ekwu ugbu a na-atụle ụkpụrụ nzuzo data, ndị ọkachamara na-ebu amụma na Gọọmentị Biden nwere ike ịchụso iwu yiri nke ahụ na ọkwa mba. Isi okwu ya bụ na ndị ahịa niile ga-adị njikere idobe iwu na-agbanwe agbanwe dịka ndị nhoputa aka-ndị na-eri ihe-na ndị ọrụ gọọmentị na-aga n'ihu na-achọ ebe nzuzo-nke mbụ dijitalụ.
Izizi Nhazi & Nzuzo
N’elu elu, ihe ịma aka abụọ a nwere ike iyi ka ha enweghị nsogbu. Kedụ ka ndị na - ere ahịa ga - esi jiri data mmadụ mee ihe iji nyefee ahụmịhe nke onwe ma mekwaa ka emee data ahụ n’ụzọ ziri ezi ma n’usoro iwu nzuzo na-agbanwe ngwa ngwa? Ọ bụ ezie na data omume bụ ụzọ kachasị mma iji mara onye ahịa na ọkwa nke mmadụ, na-agbakwụnye data omume-ọkachasị data nke ndị ọzọ na-anakọta-na nchịkọta martech nwere ike ịlaghachi azụ n'ụzọ dị mfe.
Mkpakọrịta na data omume na onye na-eweta ọgụgụ isi bụ ụzọ dị mma iji nweta nnabata omume nke atọ, na-eche na onye na-eweta ihe ngwọta na-ebute ụzọ nzuzo nzuzo ụzọ ma nwee ike ịnye data mkpebi dị iche na-emegide amụma na-ebu amụma ma ọ bụ nkezi data maka otu ndị ahịa.
Jornaya malitere n'oge na-adịbeghị anya Mee ọ rụọ ọrụ 3.0, mmelite nke usoro data omume anyị nke izizi malitere na 2018, nke na-enye ndị na-ere ahịa ọkwa ọhụụ na enweghị atụ nke nghọta data. Site na ijikọ Ọrụ 3.0 na CRM ha, ndị na - ere ahịa nwere ike ịchọpụta onye, ​​mgbe, na oge ole ndị ahịa ha na atụmanya ha na - azụ ahịa maka ngwaahịa ha.
Jornaya kwukwara Onye Nzuzo Nzuzo ka ya technology àjà na 2019, mmelite nke ihe ngwọta TCPA Guardian ya a ma ama nke nwere ike igosipụta ma anakọtara data nke atọ na nrube isi nke TCPA yana CCPA.
Imekọrịta na onye na-eweta data na nzuzo na DNA ya na-enye ndị na-ere ahịa udo nke uche bara nnukwu uru. Ha nwere ike inwe obi ike na echedoro nzukọ ha ka ha na-elekwasị anya na ike ha na usoro ịre ahịa na igbu iji mepụta ahụmịhe ndị ahịa.
Jornaya bụ onye na-eweta data maka ndị na-ere ahịa na ụlọ ọrụ ebe ndị ahịa na-etinye oge dị mkpa nyocha nhọrọ ha maka ịzụrụ ihe dị mkpa na ndụ. Jornaya rụọ ọrụ na-anakọta data nke atọ site na netwọk nke weebụsaịtị 35,000 iji chọpụta usoro ịzụ ahịa ndị ahịa na-achọpụta ma chọpụta mgbe ndị ahịa ọ bụla na-egosipụta omume ahịa-ahịa, ebe Jornaya's Guardian na-ahụ na a na-anakọta data ahịa niile na nrube isi na TCPA, CCPA, na ndị ọzọ iwu nzuzo.
Tags: data omumeomume nzuzo nke ndị ahịa Californiaikike nzuzo na mmanye californiaccpaahịa ọgụgụ isidata nzuzoiwu nzuzo dataNchịkwaIwu General Data Protection.gdprjornayaJornaya rụọ ọrụahia nsogbukeonwenzuzoonye nlekọta nzuzoiwu nzuzoechiche 24ụkpụrụtcpaonye nlekọta tcpaỤdị Nchedo Ndị Ahịa Ekwentị
Rich Smith bụ CMO nke Jornaya, ụlọ ọrụ ọgụgụ isi na-eduzi omume ọgụgụ isi na-enyere ụlọ ọrụ aka ịdọta ma jigide ndị ahịa site na iji netwọkụ nwegasịrị karịa 35,000 tụnyere ịzụ ahịa yana saịtị ọgbọ.